आमसर्वधारणको सुरक्षाका लागि खट्ने प्रहरीले नै भीख माग्नु पर्ने अवस्था आएपछि अरुको के हाल होला ? भारतको मुम्बइ प्रहरी सेवामा कार्यरत एक हवल्दार खर्च टार्ने अरु उपाय नभएपछि बर्दीमा भीख माग्ने अुनमति चाहन्छन् ।
महाराष्ट्र प्रहरीका एक हवल्दारले मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फङवीस र मुम्बई पुलिस कमिशनर दत्ता पदसालगिकरलाई चिठी लेख्दै आफूलाई बर्दीमै भीख माग्न छुटकरा दिन अनुरोध गरेका हुन् । चिठीमा लेखिएको छ ‘मलाई दुइ महिनादेखि तलब दिइएको छैन,त्यसकारण घर खर्च चलाउन साह्रै मुश्किल भो भीख माग्थे यो पुलिस बर्दीले त्यसो गर्न दिएको छैन ।
किन भीख माग्न चाहन्छन उनी ?
मुम्बई प्रहरीका हवल्दार ध्यानेश्वर अहिररावले मुख्यमन्त्री र प्रहरी कमिश्नरलाई लेखेको चिठीमा उनी भीख माग्ने मनस्थितीमा पुगेको बताएका छन् । आफूले २२ मार्चसम्मका लागि छुट्टी लिएको बताएका छन् । यही अवधिमा श्रीमतीको खुट्टा फ्याक्चर भयो र ५ दिनका लागि अत्यावश्यक छुट्टी मागे र २८ मार्चबाट नियमिति ड्युटी गर्न थाले । मार्च सकिएपछि मलाई तलब मिलेको छैन, अफिसमा त्यसबारे सोधपुछ गर्दा थाहा भो कि मैले विदा लिएका कारण तलब रोकिएको रहेछ । घरमा विमारी श्रीमती, आमा–बुवा र छोरीको स्याहार पनि मैले गर्नुपर्छ, त्यस बाहेक महिनावारी किस्ता बुझाउनु पर्ने लोन लिएको छु । तलब नै नपाउने भएपछि मलाई साह्रै समस्या भएको छ । त्यसैले म चाहनछु कि मलाई पोसाकमै रहेर भएपनि भीख माग्ने अनुमति देऊ अहिरराव शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरेको सुरक्षा समूहमा आवद्ध छन् । दैनिक भास्करबाट कलावती उप्रेतीको अनुवाद
प्रकाशित ३0 बैशाख २0७५ , आइतबार | 2018-05-13 10:25:15